मलाई बुझ्ने र असल केटा पाए विवाह गर्छु: नायिक एलिना रायमाझी:: Mero Desh
मलाई बुझ्ने र असल केटा पाए विवाह गर्छु: नायिक एलिना रायमाझी
Published on: २८ चैत्र २०७७, शनिबार २३:५२
काठमाण्डौं।नेपाली रँगमञ्चमाको क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य बनाउन तल्लीन हरूको भिडमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र परिचय बनाउँदै गरेकी पछिल्लो समय मिडिय माझ निकै च”र्चामा रहेकी मोडल हुन एलिना रायमाझी ।२०५५ साल मा अर्घाखाँचीमा जन्मिएकी एलिना रायमाझी मोडलिङ र फिल्ममा जम्ने लक्ष्यसाथ ६ वर्षअघि राजधानी आएकी हुन्।
“अर्घाखाँचीमा जन्मिएकी एलिना रायमाझी मो’डलिङ र फिल्ममा जम्ने लक्ष्यसाथ ६ वर्षअघि राजधानी आ’एकी हुन। धुम थ्री र हिरो नं १ मा नायिकाका रूपमा खेलि सकेकी रायमाझीले धेरै म्युजिक भिडियोहरुको म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन्। उनी अहिले दरबारमार्गमा रहेको आफ्नै दोहोरी साँझमार्फत सांगीतिक यात्रामा जमिरहेकी छन्।
यिनै सुन्दरीसँग प्रेम विवाह सांगीतिक क्षेत्र लगायत का विषयमा भवनाथ प्याकुरेलले लिएको अन्तर्वार्ता आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ । पत्रकारले सोेधेको बिहेबारे केही सोच्नुभएको छ भन्ने प्रश्नहरुमा विवाहबारे अहिले केही सोचेकी छैन।भोलिका दिनमा मलाई बुझ्ने मान्छे आए विवाह गर्न चाहन्छु भन्ने जवाफ दिएकी छिन ।
तपाईं कस्तो जीवनसाथी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा मलाई मेरो परिवारलाई पनि बुझ्ने केटा जीवनसाथी होस् भन्ने चाहन्छु। जसले मलाई रुवाउने काम नगरोस्। ग्लामर क्षेत्रलाई छोड नभनोस्। युवायुवतीबीच हुने प्रेम कस्तो लाग्छ भन्दा राम्रै लाग्छ म प्रेम गरेरै विवाह गर्छु। त्यो भयो भने बुझ्न पाइन्छ भन्ने जवाफ दिईन ।
तपाईंलाई प्रपोज गर्ने कति आए मलाई प्रपोज गर्ने १ हजार जति आए होलान्।म्यासेजमा कहिले विवाह गर्ने बूढी भनेर जिस्क्याउँछन्। तपाईंलाई कस्ता केटा मन पर्छ भन्दा सफा हेन्डसम स्मार्ट नरम र सबैको इज्जत गर्ने व्यक्ति मन पर्छ। तर अहिलेको जमानामा माया र इज्जत गर्ने धेरै पाइँदैनन् भन्ने जवाफ दिईन।
राम्रा केटा देख्दा मन कस्तो हुन्छ भनेर सोध्दा मेरो भइ दियोस् जस्तो लाग्दैन। तर उसको आनीबानी देख्दा उस लाई सुहाउने केटी मिलोस् भन्ने लाग्छ।ब्वाईफ्रेन्ड परिवर्तन गर्नेलाई के भन्नुहुन्छ मलाई त्यसो गरेको मन पर्दैन।अहिले गाउँदेखि सहरसम्म यस्तो धेरै देखिन्छ।
यसरी परिवर्तन नगरेकै राम्रो। २०५५ सालमा अर्घाखाँचीमा जन्मिएकी एलिना रायमाझी मोडलिङ र फिल्ममा जम्ने लक्ष्यसाथ ६ वर्षअघि राजधानी आएकी हुन्।अर्घाखाँची मा जन्मिएकी एलिना रायमाझी मोडलिङ र फिल्ममा जम्ने लक्ष्यसाथ ६ वर्षअघि राजधानी आएकी हुन्। धुम थ्री र हिरो नं १ मा नायिकाका रूपमा खेलिसकेकी रायमाझीले धेरै म्युजिक भिडियोहरुको म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन्।
धुम थ्री र हिरो नं १ मा नायिकाका रूपमा खेलिसकेकी रायमाझीले धेरै म्युजिक भिडियोहरुको म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन्। उनी अहिले दरबारमार्गमा रहेको आफ्नै कुईन रोधी नामक दोहोरी साँझमार्फत सांगीतिक यात्रामा जमिरहेकी छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा खुवै अपडेट छिन । उनले बोल्ने गाउले लवज धेरैले मन पनि पराउछन ।पाथीभारा खबर।
यो पनि भा”ईरल ट्विन्स गर्ल बलेकी प्रेमिका यस्तो राम्री हेर्नुस् नयाँ म्युजिक भिडियो (भिडियो सहित)भिडियो हेर्न समचारको अन्तिममा जानुहोस्। टिकटक को यात्रा बाट सुरु भएको कलाकारिता अहिले यि दुई दिदिबहिनी ब्यस्त छन विभिन्न म्यूजिक भिडियो मा ब्यस्त छन्। उनै दिदि बहिनी मध्य बलेकी प्रेमिका सँगको विशेष कुराकानी हेर्नुस् भिडियो अर्को समचारको अन्तिममा राखिएको छ।
यो पनि माथीको भिडियो यो समचारको अन्त मा रा”खिए को छ।कुलमानलाई नियुक्ति नगरि के पि ओली भोट माग्न आए,लखेट्ने चेताव’नी जनता ले दिन थाले को छ, पटक पटक बिजुली जाने र गर्मि सुरुवात भएपछि जनतामा पनि आ’क्रोस देखा पर्न थालेको छ । राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि कुलमा नलाई प्राधि’करण बाट ह”टाए पछि जन तामा नि”राशा छाएको छ,।
“कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्र शाक्यलाई प्राधि’क रणमा नियुक्ति गरेपछि पटकपटक बिजुली जाने गरिरहेको छ,र प्रा”धि’करण प्रमुख शाक्यले खोलामा पानी नभएको कार णले बिजुली जाने आउने भएको बताएको छन ।कुलमान हुदा खोलामा पानी कम नहुने,२४ घण्टा बिजुली आउने तर कुलमानलाइ हटाए संगै पानी स्वात्त सुक्ने कस्तो खोला हो भनेर सर्वसाधारणले प्रश्नको वर्षा गर्न थालेका छन,
“रिपोर्टिङको क्रममा विभिन्न ठाउँमा जाँदै गर्दा हामीले सर्वसाधारणलाई प्रश्न गरेको थियो , प्रश्न गर्ने क्रममा झापा दमकका रामप्रसाद भन्छन् , अब भोट माग्न आए लखे’ट्छौ,हामीले पटक पटक प्र”धानमन्त्री बनाए पनि प्रधानमन्त्रीले जनताको गुनासो नसुनेपछि हामीलाई किन चाहियो प्रधानमन्त्री ?
“त्यस्तै श्याम सुन्दर भन्छन् , धेरै पटक जनता लाई नेता हरूले दुख दिए,अब भोट माग्न आउदा,मा’सु र’क्सिमा बिक्नु हुन्न जनता, लखेट्नु पर्छ, मिठो भाषणमा मख्ख पर्नाले दशकौंदेखिनेपाली जनताले दुख पाए, अब पनि सहने?अब पनि भोट दिने, अब भोट दिनुपरेको खण्ड मा बरु ओैला कि’च्याउने तर भोट नदिने ,र भोट माग्न आउनेलाई ल’खेट्ने बताउछन् ।
बिवाह मण्डप मै वेहुला वेहुली को ठुम्का
एउटै प्रदेशभित्र चल्ने सवारिको भाडा समायोजन नभएको भन्दै यातायात ब्याबसायिले निकाले र्यालि
ठमेलको ट्रेकिङ सामान बेच्ने पसलमा तरकारी-फलफूल बेच्न थालेपछी …
“संसार लाई चकित पार्ने प्रतिभा!(भिडियो सहित)
जन्मदिनमा रक्षासँग ‘मञ्जुरी’ सार्वजनिक गर्दै जिग्री